Nanao fihetsiketsehana tao Baku ny vehivavy taorian’ny famonoana olona mahatsiravina · Global Voices teny Malagasy
Mbola tsy misy miresaka ny famonoana vehivavy any Azerbaijan
Voadika ny 25 Febroary 2021 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Español, Français, Português, Ελληνικά, عربي, Nederlands, English
Tao amin'ny OC Media ity lahatsoratra ity no nivoaka voalohany tamin'ny teny Anglisy. Navoaka eto indray ny lahatsoratra nasiam-panovana tamin'ny alàlan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
“Na eo aza ny toe-javatra mampahonena iainan'ny vehivavy any Azerbaijan dia tsy mandray andraikitra matotra ary tsy mijery ny toe-java-misy ankehitriny ny Komitim-panjakana misahana ny raharaha momba ny Fianakaviana, ny Vehivavy ary ny Ankizy”, hoy ny iray tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny Voice of America.
Nilaza ny mpanao hetsi-panoherana fa ny famonoana feno habibiana an'i Banu Maharramova, vehivavy 32 taona, no nahatonga ny fihetsiketsehana izay hita tao anaty daba-pako tany amin'ny distrikan'i Nasimi, Bakò ny vatany voarasarasa ny 27 Janoary. Nilaza ny polisy tany an-toerana fa maty novonoin'ny rafozan-dahiny 75 taona, Idris Maharramov izy.